Olan’ny Mpitsara any Korea Atsimo: Zon’ireo Tsy Mety Manao Miaramila
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kikaonde Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tsonga Xhosa Zoloa Éwé
Nitomany ny lehiben’ny fitsarana tao amin’ny Fitsaram-paritr’i Suwon rehefa namaky ny didim-pitsarana momba an’i Chang-jo Im, tovolahy 21 taona. Voaheloka higadra izy satria tsy nety nanao miaramila. Efa namoaka didim-pitsarana nanameloka mpanao heloka bevava dimy izy, tamin’io andro io, nefa tsy nampaninona azy izany. Nampitomany azy anefa ity raharaha ity satria hitany hoe tsy rariny. Tsy nanan-tsafidy izy, fa voatery nanameloka an’io tovolahy Vavolombelon’i Jehovah io higadra herintaona sy tapany.
Mitsara raharaha mitovy amin’izany foana ny mpitsara any Korea Atsimo, isam-bolana. Misy tovolahy iray milaza eo anatrehan’ny fitsarana hoe tsy manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Melohin’ny mpitsara higadra herintaona sy tapany toy ny mahazatra izy avy eo, na manao ahoana na manao ahoana toe-javatra misy azy. Hoy ilay mpitsara atao hoe Young-sik Kim, rehefa nilaza ny didim-pitsarany momba ny olona iray tsy nety nanao miaramila: “Sarotra amin’ny mpitsara ny hino hoe ‘manasazy mpanao heloka bevava’ izy ireo rehefa manasazy olona tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretana.” Izany no nahatonga azy hisalasala raha mihatra amin’ireo tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany ny sazy ho an’ireo mandositra rehefa antsoina hanao miaramila.
Vavolombelona voaheloka higadra, isam-bolana, noho izy tsy mety manao miaramila: 40-50
Vavolombelona migadra ankehitriny noho izy tsy mety manao miaramila: 602
Vavolombelona nigadra noho izy tsy nety nanao miaramila, nanomboka tamin’ny 1950: 17 840
Tsy mety manaiky ny zon’ny olona tsy hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany i Korea Atsimo, sady tsy manisy fanompoana sivily ho solon’ny raharaha miaramila. Tsy afa-miala amin’io olana lehibe miverimberina io ny mpitsara any, ary voatery manameloka an’ireo tsy manao miaramila ho mpanao heloka bevava. Fantatr’ireo mpitsara koa ny didy navoakan’ny Komitin’ny Firenena Mikambana Miaro ny Zon’olombelona tamin’ny raharaha maromaro nahatafiditra tovolahy 501. Nilaza io Komity io fa tsy manaja ny fifanarahana iraisam-pirenena nataony momba ny fanajana ny zon’olombelona i Korea Atsimo, satria manameloka sy managadra an’ireo tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Mihamaro àry ny mpitsara enjehin’ny eritreriny rehefa manasazy tovolahy kristianina tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany.
Vao tamin’ny 2011 ny Fitsarana Momba ny Lalàm-panorenana any Korea Atsimo no namoaka didy hoe anisan’ny Lalàm-panorenana ny lalàn’ny raharaha miaramila. Mbola nisy mpitsara enina ihany anefa nitondra raharaha mahakasika an’izany tany amin’io Fitsarana io. Niresaka zavatra mampanahy hafa koa ireo mpitsara.
Ny tenin’ny mpitsara sasany momba ny hoe ...
Mety ve ny managadra olona tsy mety miady noho ny feon’ny fieritreretany?
“Ny feon’ny fieritreretan’ny olona tsirairay no mahatonga azy hisy vidiny sy hanana ny hajany. Ny hiaro azy io no tena tanjon’ny Lalàm-panorenana rehefa miaro ny zon’ny olona hanaraka ny feon’ny fieritreretany. ... Marina fa tsy mifanaraka amin’ny hevitry ny besinimaro ny fanapahan-kevitr’izy ireo tsy hanao miaramila. Sarotra anefa ny hilaza hoe heloka bevava manohitra ny fiaraha-monina sy ny firenena ny fanapahan-kevitr’izy ireo, ka mendrika hampiharana sazy henjana toy ny mpanao heloka bevava.”–Hye-won Lim, mpitsara ao amin’ny Fitsaram-paritr’i Suwon, 21 Febroary 2013, 2012Chogi2381.
‘Tena mamolavola ny toetran’ny olona iray ny fanapahan-keviny momba ny fifandraisany amin’ny hafa sy ny fanehoany fiheverana ny hasarobidin’ny aina. Tafiditra amin’izany koa ny fanapahan-keviny tsy hanala ain’olona, na dia misy ady ampiasana fitaovam-piadiana aza. Ho voahitsakitsaka ny zon’ny olona toy izany sy ny maha izy azy raha terena hanao miaramila na handray fitaovam-piadiana izy, sady rahonana hoe hosazina raha tsy manaiky. Tsy manaja ny maha olona mihitsy izany.’–Young-hoon Kang, mpitsara ao amin’ny Fitsaram-paritra Avaratr’i Séoul, 14 Janoary 2013, 2012Chogi1554.
Lasa tsy milamina kokoa ve ny firenena raha omena zo tsy hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany ny olona?
“Tsy misy porofo na fanazavana marim-pototra sy voafaritra tsara manamarina fa lasa tsy milamina ny firenena ary misy ny tsy fitoviana eo amin’ny fanaovana raharaha miaramila, rehefa asiana fanompoana sivily.”–Gwan-gu Kim, mpitsara ao amin’ny Fitsaram-paritr’i Changwon Masan, 9 Aogositra 2012, 2012Chogi8.
“Tsy misy porofo ampy hilazana fa tena ho simba ny filaminam-pirenena, ka lasa tsy ho azo arovana ny hajan’ny olona sy ny hasarobidin’ny olom-pirenena rehetra rehefa misy olom-bitsy, anisan’izany ny Vavolombelon’i Jehovah, ... mandà tsy handray fitaovam-piadiana sy hampiofanina hiady. Ilay voampanga ... koa efa nanda tsy hanao miaramila na dia hosazina aza. Tokony ho efa notandindomin-doza ny filaminam-pirenena sy ny hajan’ny olona ary ny hasarobidin’ny olom-pirenena rehetra, raha tena nitombina ilay fiampangana.”–Seung-yeop Lee, mpitsara ao amin’ny Fitsaram-paritr’i Ulsan, 27 Aogositra 2013, 2013Godan601.
Ahoana no andaminana an’io raharaha io?
“Milaza ny Fitsarana Momba ny Lalàm-panorenana fa mifanohitra amin’ny Lalàm-panorenana ny famelana ny olona tsy hanao miaramila. Sady afaka manisy fiheverana ny filaminam-pirenena anefa ny fitantanan-draharaham-panjakana sy ny Antenimieram-pirenena, no afaka mieritreritra momba ny fahalalahana hanaraka ny feon’ny fieritreretana. Azony atao koa ny manao lalàna mamela ny olona tsy hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany, sady manamafy orina ny filaminam-pirenena.”–Young-sik Kim, mpitsara ao amin’ny Fitsaram-paritra Atsimon’i Séoul, 9 Jolay 2013, 2013Chogi641.
“Sady tsy hampihena ny herin’ny tafika no tsy hisy vokany lehibe amin’ny filaminam-pirenena ny fametrahana rafitra momba ny fanompoana sivily, raha ohatra ka ny tanjona amin’ilay izy dia ny mba tsy hisian’ny olona mandositra rehefa antsoina hanao miaramila, satria hoe tsy eken’ny eritreriny izany.”–Seong-bok Lee, mpitsara ao amin’ny Fitsaram-paritra Atsinanan’i Séoul, 20 Febroary 2014, 2014Chogi30.
Inona no mety hataon’ny Fitsarana Momba ny Lalàm-panorenana?
Nangatahin’ireo mpitsara ireo mba hanome vahaolana amin’io olana manahiran-tsaina momba ny raharaha miaramila io ny Fitsarana Momba ny Lalàm-panorenana. Nanaiky handinika raharaha 29 ny Fitsarana, ka anisan’izany ny roa izay mahakasika lehilahy 433.
Inona no ho fanapahan-kevitry ny Fitsarana Momba ny Lalàm-panorenana amin’ireo raharaha ireo? Hamela ny olona hanan-jo tsy hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany ve ny fitsarana tampony any Korea Atsimo, ka hisy lalàna vaovao vokatr’izany? Raha manao izany izy, dia hanaja ny fifanarahana iraisam-pirenena nataony sy ny Lalàm-panorenany, ary hanaja ny feon’ny fieritreretan’ny olona maro. Hitondra fanamaivanana ho an’ireo tovolahy an-jatony migadra tsy ara-drariny izany.